"Kwakungekho empilweni yomuntu" lizama ngokuvamile ukuthi akabakhathalele kangakanani abantu umndeni ibinzana. Uma wesibili, bathi kuye: "Kusuka empilweni yakho uyaphila." It kuvela ukuthi iningi ukuphila siqu kulingana umndeni. Kungakhathaliseki zonke ziyavumelana nalokhu?
Abesifazane abakhulisa izingane wedwa futhi ekuthwaleni umthwalo umndeni izinkinga zansuku zonke, cishe uyovumelana no-le "equation". Abesilisa acishe never ekhaya, yenza umsebenzi wayo getter nokusekelwa okuyisibonelo nemindeni yabo kungenzeka yokuvikela ilungelo. They tshela ukuthi ngezikhathi ezithile zidinga impilo yangasese akuhlobene ukuphila kwansuku zonke womsebenzi ibhizinisi futhi enemithwalo yemfanelo yasekhaya. Futhi hlobo luni okuqukethwe imali kule umqondo: noma ubudlelwane uzozala omunye wesifazane futhi, noma enyuka ezintabeni, kujule kuze phansi amadamu noma ngendiza Awama-Glider - le indaba kanembeza futhi esikuthandayo.
Uyini empilweni yakho?
Abaningi bakholelwa ukuthi kuyinto endaweni eyimfihlo akekho ukwazi.
Abanye banomuzwa wokuthi lena noma yiluphi uhlobo ubuhlobo phakathi kwendoda nowesifazane.
Kanti abanye ukuthini ngalokhu umqondo wokuphila elihlobene ne izithakazelo siqu ukuthi ngalutho ngesevisi nemisebenzi yezenhlalakahle. iphuzu ngalinye umbono kunengqondo.
Kusuka umiphi endabeni yokuphila siqu ubonwa njengenhlangano indawo yasendlini, umndeni, kobunye ubuhlobo obuseduze, singabi umthwalo imisebenzi yomphakathi.
Odokotela bengqondo sikubheka njengempahla sphere ngentuthuko yomuntu ngamunye. Kukhona yonke indawo, eklanyelwe ukusiza ukunikeza izinkonzo ekuthuthukiseni lesi sici ekuphileni esebenzisa ekuthuthukiseni izimfanelo yabo uhlamvu. Ngakho, ochwepheshe ukusiza umuntu ngcono izinga lokuphila kwakhe, kuhlanganise.
Emlandweni ekukhuleni komphakathi kwakuyinkathi lapho siqu ekuphileni komuntu sasilezikhwelo kuphela ekuqinisekiseni ukusinda ngokomzimba kokubili ngamunye futhi wonke umphakathi. Kwakudingeka ukuba yena uSolomoni ngokwami nezinye izinhlobo zokudla ukuze babe ukwakha uphahla phezu kwekhanda lakhe. Angizange ngisho babe nomqondo zobumfihlo. Kamuva, kodwa ngaphambi nokuthuthukisa ithekhnoloji, saqala ukuba ngiziqonde umuntu njengoba umelele umsebenzi othile, ukwenza izinto zokuchitha isizungu, noma omunye umsebenzi futhi namanje awuhambanga.
Namuhla, ngamunye efuna ukuqinisekisa ukuthi bakhe umsebenzi okhokhelwayo kwaba ephawulekayo sihluke singakunaki ukuphila komuntu yokuzilibazisa ngezinga elingakanani. Manje wonke umuntu ofuna ukwenza ushintsho ekusebenzeni esimweni non-ukusebenza lalibukeka ngokucijile ngangokunokwenzeka. umuntu ongavamile ngokuzithandela ithatha umsebenzi ekhaya. Phuma kuzo ehhovisi umnyango, esitolo noma ukuphathwa kusho ushintsho kwenye indlela yokucabanga nokuziphatha ehlukile umsebenzi. Ngokuvamile kuba umdlalo, kodwa zingase zibe khona ezinye izinketho.
Kodwa kuthiwani ngokuphila siqu kusuka ezisebenzini ezingebona manual, abasebenzi kuyisayensi, umsebenzi bokusungula okubandakanya ayimi umsebenzi umbuso? Iyini indima jikelele ulwazi ekuphileni kwebantfu?
Okokuqala, abantu, ayehlome kubo, bakwazi kangcono ukuzivumelanisa umphakathi. Ziyakwazi wokuncintisana kakhudlwana, ukuze bakwazi ukuthola umsebenzi ongcono. On ukuphila komuntu laba bantu, futhi, Akuvamile ukuba yinkinga, ngoba bayazi ukuthi ukufunda izincwadi noma kubani ungathola iseluleko lochwepheshe.
Isikhumba Knothide - indlela igolide